आईजीपीले नै सीडीआर बोकेर हिँडेपछि के भन्‍ने ? सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा प्रहरीभित्र जे भयो
१२ फाल्गुन २०७६ सोमबार
बिहानै मोबाइल बज्यो । अनौठै भयो । अनौठो किनभने परिचितकै नम्बर भए पनि एक वर्षयता उनले सोझै मोबाइलमा यसरी फोन गर्दैनथे । भाइबर वा वाट्सएपमा मात्र सम्पर्क हुन्थ्यो । मलाई यही बानी लागेछ ।
“आज २८ माघ हो नि,” रिसिभ बटन दबाउन नपाउँदै उताको आवाज कानमा ठोक्कियो । १९ माघ त थाहा थियो, राजाले एकलौटी शासन हत्याएको दिन । २८ माघ के रहेछ ? सोच्‍न नभ्याउँदै उनैले थपे, “अब त आईजीपीले कल डिटेल हेर्दैनन् होला नि । अनि सोझै फोन हानियो ।” उनको स्वर यति खुसी सुनियो, मानौँ– बालकले वर्षौंदेखि पर्खिएको वस्तु बल्ल पाएको छ ।
आईजीपी कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरीको फोन थियो, त्यो । र, आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल सोही दिन अवकाश पाउँदै थिए । संवादको अन्तिमतिर उनले भने, “यत्तिका समय धेरैसँग चाहेका बेला सम्पर्क गर्न सकिएन । तपाईंहरू सबै बुझिहाल्नुहुन्छ ।”
दिउँसोपख पनि केही पूर्वप्रहरी अधिकारीसँग भेट भएको थियो । उनीहरूलाई पनि सचिवालयका केही प्रहरीले फोनमा उही भावमा विलाप गरेछन् । खनाल अवकाशमा गएको भोलिपल्टदेखि त पहिले भेट्न तर्कने प्रहरी पनि ‘सरी है, अप्ठेरो थियो’ भन्दै सम्पर्कमा आउन थाले ।
आफ्नो कार्यशैली, विवादास्पद भूमिकाबारे सञ्चार माध्यममा ‘क्रिटिकल’ समाचार आउन थालेपछि नै खनालले सचिवालयसहित आफ्ना विरोधी ठानेका प्रहरी अधिकारी तथा केही पत्रकारको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेर्न थालेका थिए । त्यही भएर प्रहरी फोनमा कुराकानी गर्न डराउने थाहा थियो । तर खनालले यति थुरथुर बनाएर राखेका छन् भन्‍ने मैले कल्पनै गरेको थिइनँ ।
नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने गरी दुरुपयोग गरेपछि नै अदालतको आदेशमा मात्र प्रहरीले सीडीआर हेर्न पाउने कानुन केही वर्षअघि मात्र आएको थियो । समयमै सीडीआर नपाउँदा अपराधी उम्कने भन्दै प्रहरीले यो व्यवस्था अव्यावहारिक मानेर चित्त बुझाइरहेको छैन । तर आईजीपीले नै सीडीआर बोकेर हिँडेपछि के भन्‍ने ?
खनालको दबदबा सहनेहरूले भने पक्कै उनको अवकाश मितिलाई स्वतन्त्रता दिवस मान्लान् कि ?
पुस पहिलो साता प्रहरीले छापा मारेर अवैध गतिविधिमा संलग्‍न १ सय २२ चिनियाँ पक्राउ गर्‍यो । एकै पटक यति धेरै विदेशी पक्राउ परेको अहिलेसम्मकै पहिलो घटनाका रुपमा प्रहरीले प्रचार गर्दै थियो । तर जसले यो केस सुरुदेखि अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुर्‍याउँदै थियो, त्यो टिमलाई अपरेसनबारे पत्तै थिएन । तर अपराधका योजनाकार भगाएर कामदार मात्रै पक्राउ परे ।
सन्दिग्ध चिनियासँग आईजीपी खनाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सम्बन्ध देखाउने फोटोसहित गडबडीको सूचना आयो । यसलाई पुष्टि गर्ने थप सूचना र प्रमाण चाहिन्थ्यो । तर आईजीपीले सीडीआर हेर्ने भएकै कारण टेलिफोन गर्न सकिएन, स्रोतहरूलाई । वाट्सएप, भाइबरमा म्यासेज छाडेको दुई दिन बितिसक्यो तर सूचना चुहाएर खबरदाता बेपत्ता । बल्लतल्ल दुई जना सम्पर्कमा आए । तर कहाँ भेट्ने ? फोन मात्र होइन, व्यक्तिको गतिविधिमै जासुसी गरेको हुन सक्ने डर माने ।
ठाउँ गोप्य राख्‍ने सर्तमा भेटियो । दुई–तीन घन्टा कुराकानीपछि बल्ल चिनियाँ समूहमा घुसेको पात्रले सन्दिग्ध चिनियाँले आईजीपीसँग आफ्नो दोस्ती जमिसकेको भन्दै भ्वाइस म्यासेज पठाएको रहस्य खोल्यो । प्रमाणसहित मध्यरातमा निस्किएँ ।
पढ्नुस् #NepalMag खुलासाः चिनियाँ अभियुक्तको कनेक्सन आईजीपीदेखि मन्त्रीसम्म
समाचार छापिएपछि फेरि उनीहरूसँग सम्पर्क टुट्यो । र, अहिले आईजीपीको बिदाइसँगै झुल्किएका छन् । अनि, आईजीपीको दबदबादेखि उनका निजी मामिलाका यस्ता थुप्रै किस्सा प्रहरी मुख्यालयमा दिन कटानीको मेलो बनेको छ, हिजोआज ।
कुनै पनि संगठनको नेतृत्वमा आउजाउ सामान्य प्रक्रिया हो । तर यस्ता पदमा आउने निश्चित व्यक्तिले भने यही सामान्य कर्मलाई असामान्य बनाइदिँदा रहेछन् । सेलिब्रिटी छवि बनाएका खनालले यस्तै छाप छाडे । ‘जय नेपालको नाराले, प्रहरी चल्दैन यो पाराले’ भन्‍ने आगतको नेतृत्वले पक्कै बुझ्‍नेछ ।